कुनै केटीले तपाइँलाई मन पराउँछे कि मन पराउँदिन भन्ने जान्न चाहनु हुन्छ? यस्ता सँकेत देखाउँछिन, हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > कुनै केटीले तपाइँलाई मन पराउँछे कि मन पराउँदिन भन्ने जान्न चाहनु हुन्छ? यस्ता सँकेत देखाउँछिन, हेर्नुस्
कुनै केटीले तपाइँलाई मन पराउँछे कि मन पराउँदिन भन्ने जान्न चाहनु हुन्छ? यस्ता सँकेत देखाउँछिन, हेर्नुस्
प्रेम मानव जीवनको भावनात्मक शब्द हो । तर, यसलाई परिभाषित गर्न असम्भव छ । प्रेमलाई शब्दमा परिभाषित गर्न उचित पनि हुँदैन् । जसरी हामीले हावामा उडिरहेको फुलहरुको सुगन्ध देख्न सक्दैनौं तर अनुभव गर्न सक्छौं । त्यस्तै प्रेम पनि एक भावना हो । प्रेम विभिन्न मानिस, फरक उमेर र विभिन्न सम्बन्धको लागि फरक हुन सक्छ । जुन प्रेम आकर्षणबाट सुरु हुन्छ, त्यो क्षणिक हुन्छ । आकर्षण कम या समाप्त भएमा प्रेम लुप्त हुन्छ ।
जुन प्रेम सुख, सुविधाबाट प्राप्त हुन्छ, घनिष्ठता त हुन्छ तर, स्थायी उत्साह, आनन्द र खुशी भने मिल्दैन । प्रेम अनन्त हुन्छ । तपाई प्रेमको जति नजिक जानुहुन्छ, त्यती नै आकर्षण लाग्छ । प्रेम आकाश जस्तै अनन्त छ, जसको कुनै सिमा छैन् । प्रेमको कुरा हर कोहीले गर्छन् तर यसलाई बुझ्ने विरलै भेटिन्छन् । बच्चा जव आफ्नो आमाको गर्भबाट बाहिर आउँछ । उसको लागि प्रेमको अर्थ आमा हुन्छ । एक प्रेमीको लागि उसको प्रेमिका हुन्छ । उदाहरणको लगि लैला–मजनु, रोमियो–जुलियट, मुना–मदन आदि ।
प्रेम दुःखदायी पनि हुन सक्छ । किनकी, प्रेम प्राप्त गर्नको लागि केही गुमाउनु पनि पर्छ । बदलामा केहि नपाइकन केहि गुमाउनुमा केहि कष्ट हुँदैन् भने यसको मतलव तपाईको उ प्रति सच्चा प्रेम हो । निश्चल, निष्कपट त्यागको विना तपाई प्रेमलाई बुझन सक्नुुहुन्न । प्रेम अनमोल हुन्छ । तर, निःशुल्क पाइन्छ । तपाईले तय गर्न सक्नुहुन्न, प्रेम कहिले, कहाँ र कति बेला हुन्छ ।
प्रेम न त बेच्न सकिन्छ न किन्न । कसैले पनि कसैलाई प्रेम गर्न बाध्य पार्न सकिदैन् । प्रेम एक सर्वशक्तिशाली अनुभुति हो । आफ्नो भावनाको प्रकट गर्नको लागि यसको उपयोग या दुरुपयोग पनि गनै सक्छन् । हरेक पुरुषलाई आफूसँग कुनै स्त्री आकर्षित हुन्छे कि हुन्ने भन्ने चासो र चिन्ता हुन्छ । तपाइँ कुनै केटीले तपाइँलाई मन पराउँछे कि मन पराउँदिन भन्ने जान्न चाहनु हुन्छ भने यी कुरा विचार गर्नुस् ।
कुनै पनि केटीले तपाइँलाई मन पराउँछे भने उसले तपाइसँग बोल्दा आफ्नो कपाल टोक्ने गर्छे । आफ्नो कपाल चलाउँदै कुनै युवती तपाइँसँग बोल्छे वा बोल्दा कपाल चलाइरहन्छे भने बुझ्नुस् उसले तपाइँलाई मन पराउँछे र तपाइँको ध्यान खिच्न चाहन्छे । यदि कुनै केटीले तपाइँसँग घुमफिर गर्न वा समय विताउन तयार हुन्छे भने बुझ्नुस् उसले तपाइँलाई मन पराउँछे । यो साथीकोरुपमा होस् वा प्रेमकै रुपमा ।
यदि तपाइँसँग कुनै केटीले आँखा जुधाएर कुरा गर्छे भने बुझ्नुस् उ तपाइँसँग नजिक हुन र कुरा सुन्न चाहन्छे । तर आँखा अन्तै राखेर कुरा गर्ने केटीले या त तपाइँको कुरा मन पराएका छैनन् या उनीहरु तपाइँसँग नजिक अनुभव गर्दैनन् भन्ने बुझाउँछ । केटीहरु त्यस्ता केटासँग कुरा गरेर समय ब’र्वाद गर्दैनन् जो उनीहरुलाई मन पर्दैनन् । तपाइँसँग कुरा गर्न इच्छुक केटीले तपाइँलाई म पराइरहेकी पनि हुन्छे ।
कति कति बेला केटीहरु अली चर्को स्वरमा केटासँग कुरा गर्छन् । यसो गर्नु सँधै रि’साएको मात्र होइन कहिले काँहि खुसी नै रहेको तर प्रेम बुझाउनका लागि पनि गर्छन् । तपाइँको कुरा मन पराउने केटीले मात्र तपाइँसँग चर्को स्वरमा कुरा गर्छन् । ६. तपाइँलाई मन पराउने युवती तपाइँसँग हुँदा हाँसी खुसी देखिन्छन् । उनीहरुले तपाइँसँग रहेको समय हाँसी खुसीमै वितेको देखाउन पनि चाहन्छन् ।
तर बाटोमा कुनै केटीले हाँस्दैमा भने यसको अर्थ त्यस्तो लाग्दैन । तपाइँसँग भेट्न आउँदा चिटिक्क परेर वा बनेर आउने केटी पनि तपाइँलाई प्रभाव छोड्न चाहेको बुझ्नुस् । अरुबेला वास्ता नगर्ने तर तपाइँलाई भेट्न आउँदा भने सम्हालिने केटीले तपाइँलाई मन पराउँछिन् ।
अर्काकि श्रीमति, १ बर्षे बच्चा र पैसा लिएर फ’रार, कोहि कसैले देखेमा यो नम्बरमा कल गर्नुहोस- सहयोगका लागि शेर गर्दिनु होला